हिड्दा हिड्दै खुट्टा पाक्यो, पैदल यात्रीलाई पानी समेत दिदैन ! भोक भोकै सुत्न बाध्य (भिडियो सहित) – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Video/हिड्दा हिड्दै खुट्टा पाक्यो, पैदल यात्रीलाई पानी समेत दिदैन ! भोक भोकै सुत्न बाध्य (भिडियो सहित)
हिड्दा हिड्दै खुट्टा पाक्यो, पैदल यात्रीलाई पानी समेत दिदैन ! भोक भोकै सुत्न बाध्य (भिडियो सहित)
चैत ११ गतेदेखि सरकारले ल,कडाउन घो,षणा गरेपछि धेरै मानिस आफू कार्यरत स्थानमै रोकिए । सबैभन्दा धेरै संघीय राजधानी काठमाडौंमा लकडाउनका का,रण धेरै मजदुर अ,लपत्र परे । दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका मजदुरहरु अहिले खाद्यान्न जोहो गर्न नसक्दा हिडेरै आफ्नो गाउँ फर्कन बाध्य भएका छन् ।
अहिले दिनहुँजसो काठमाडौं र पूर्वदेखि पश्चिमका मानिसहरु हिडेरै आफ्नो गन्तव्यमा जान थालेका छन् । त्यसरी दुई तीन दिन लगाएर वीपी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुली–खुर्कोट आइपुग्ने मानिसहरुलाई धेरैजसो भोको पेटमा भेटिन्छन् ।चैत बैशाखको त्यो तातो घाम अनि तातो सडकमा चप्पल घिसार्दै आफ्नो गन्तब्य तिर लम्किनेको अहिले भिड नै हुने गरेको पाइन्छ । हिड्दा हिड्दै थाकेपछी मध्येरातमा सडकमै सुत्ने गरेको पैदल यात्रि हरु बताउछन । हिड्दा हिड्दा आफ्नो खुट्टाहरु सुन्निदै आएपछी लर्खराउदै हिडेको देख्न सकिन्छ ।
बाटोमा केहि सटर खुलेको पाइए पनि उनीहरुले पानि माग्दा समेत नदिने गरेको उनीहरुले गुनासो गरे । काठमाडौँमा खाना नपाएर मर्ने अवस्था देखेपछी आफ्नै गाउ जाने निर्णय गरेको ति मजदुरहरुले बताए । सरकारले लक डाउन थप गरेसंगै दिनहु सयौको संख्यामा पैदल हिडेर सिन्धुली–खुर्कोट आइपुग्ने गरेको पाइएको छ ।बाकी भिडियोमा हेर्नुस : भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नु होला !!
रुकुम घटनाको नया रहस्य ! नवराजको गुप्ताङग नै काटेर फालेको आरोप हेर्नुस् (भिडियो सहित)
Sheep and wool production systems in Nepal